कर्णाली प्रदेशको अवस्था र अबको... :: चन्द्र काफ्ले :: Setopati
सशक्त व्यवस्थाले बनाएको आर्थिक स्वावलम्वन र सम्पन्नताले खसराज्यको प्रभाव र फैलाव नेपाल (काठमाडौं), लखनउ, काश्मीर र तिब्बतसम्म पुगेको गौरवशाली ईतिहास छ। अब कर्णालीले त्यो बैभव पुनःस्थापित गरी समृद्धिको नयाँ आयाम कोर्न सक्नेछ। पछिल्लो समय सबैले सम्भावनाको भुमि देख्नुमा कर्णालीको इतिहास, संस्कृति, परम्परा, भाषा, भेषभुषा, पर्यटन, वनस्पति, जडिबुटि र जलश्रोत मुख्य कारण रहेका छन्। त्यसैले अचेल चुनावका नारा, योजनाका खाका, नेतृत्वका भाषण र आम मानिसका सपनाहरुमा समृद्ध कर्णालीको चर्चा बढिरहेको छ।
के ती सबै सम्भावनाहरु मुर्त हुन सक्लान्? के प्रदेश सरकारले त्यो क्षमता राख्दछ? सरकारका प्राथमिकताहरु के हुनपर्छ? र चुनौतीहरु के छन्? यी प्रश्नहरुलाई ध्यानदिन जरुरी छ। यथार्थको धरातलभन्दा निकै माथिबाट देखिएका सपनाहरु पूरा नहुँदा ‘मास फ्रस्ट्रेशन’ निम्तिन सक्छ। छिटै समृद्धि ल्याउने तिव्र लालसाले बन्ने हचुवा नीति, योजना, प्राथमिकता र खर्च प्रणाली र त्यसले सृजना गर्नसक्ने कार्यान्वयन पक्षका कमजोरी, अदुरदर्शिता र अनियमितताले अपुरणीय क्षति हुने खतरा हुन्छ। कर्णाली प्रदेशको अगाडिको बाटो सजिलो पटक्कै छैन। त्यसैले, अहिलेको प्रदेश नेतृत्वले लोकप्रिय बन्नलाई नभई सुझबुझपूर्ण निर्णय लिनसक्नु अपरिहार्य छ।
मानव विकासको कमजोर अवस्था र गरिबीको चक्रः कर्णाली प्रदेशको मानव विकास सूचक सबैभन्दा न्यून ०.३९० छ जबकि राष्ट्रिय औसत ०.४९० छ। साक्षरता दर पनि सबैभन्दा न्यून ६२ दशमलव ७७ छ जसको राष्ट्रिय औसत ६५ दशमलव ९ हो। सरदर आयु सबैभन्दा कम अर्थात ५५ दशमलव ६ बर्ष मात्र छ जबकि राष्ट्रिय औसत करिब ६१ बर्ष छ। त्यसैगरी, औसत प्रतिव्यक्ति आय पनि राष्ट्रिय औसत ७१८ भन्दा निकै कम ४७४ दशमलव ८६ अमेरिकी डलर बराबर मात्र छ। कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा बढी गरीब बस्ने प्रदेश हो।
प्रदेशको कमजोर सामर्थ्य, अपुरो बजेट र अनिश्चित स्रोतः सामर्थ्यका हिसावले कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा कमजोर छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी)मा यो प्रदेशको योगदान हालसम्म एकदमै न्यून छ। प्रदेशगत उत्पादनका विविध क्षेत्रहरुमा यस प्रदेशले कृषि तथा बनपैदावरतर्फ ५ प्रतिशत, निर्माण कार्यतर्फ ४ प्रतिशत तथा थोक र खुद्रा व्यवसायतर्फ ३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको यस प्रदेशले होटेल र रेस्टुराँ तर्फको जीडीपीमा केवल २ प्रतिशतमात्र योगदानगर्न सकेको छ।
प्रदेशको आफ्नै भरपर्दो राजस्वका आधार र आन्तरिक स्रोतहरु छैनन्। तिब्बततिरका भन्सारहरु सक्रिय छैनन्। ठूला उद्योग धन्दाहरु स्थापना भएका छैनन्। पर्यटन भर्खर बामे सर्दैछ। एउटै स्रोत भनेको केन्द्र सरकारले विनियोजन गर्ने बजेट हो। यस वर्ष सातै प्रदेशले बराबर समानीकरण रकम रु. १ अर्ब २ करोड ५ लाखको बजेट प्राप्त गरेका छन्।
प्रदेश सरकारले नीति योजना निर्माण गर्दा निकै सोचविचार गर्नु जरुरी छ। तत्काल ऋण परिचालन गरि ठूला योजना सुरु गर्नु अघि के सोचौं कि कतै यसले जनताको थाप्लोमा केवल ऋण मात्र थपिने त हैन? श्रोत र अनुभवको अभावमा गरेका गलत कदमले दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ। कम खर्चिला र स्थानीयको सहभागितामा गरिने योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
(जनस्वास्थ्य सेवा प्रणालीको अनुगमन तथा मुल्यांकन विशेषज्ञको रुपमा कामगर्ने लेखक चौंलागाई कर्णाली प्रदेश तातोपानी गाउँपालिका लाम्रा गाउँका बासिन्दा हुन्।)
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत २७, २०७४, १०:५१:१४